Sri Lanka: Ireo Zanaky ny Korontana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2017 5:30 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2005 )
Mitaky asa avy hatrany ny fandraisana anjaran'ny ankizy Sri Lankey tamin'ny LTTE mba handresena lahatra tsy handraisana ankizy amin'ny hoavy, hatramin'ny fanampiana sahady ireo ankizy nidonan'ny ady. Taorian'ilay ‘tsunami’ tamin'ny 2004 sy ny ady an-trano, lasa nitombo be ny fironan'ireo ankizy Sri Lankey hiditra ho miaramila hanatevina ny elatra mitampiadiana ao amin'ny Tigra Tamola.
Niafara tamin'ny famindràna olona maherin'ny 550.000 ilay tsunami, raha ilay ady an-trano nandritry ny sivy taona kosa tao Sri Lanka niteraka famindràna toerana olona 800.000, ka ny ampahatelon'ireo dia ankizy avokoa. MAtetika dia ieo ankizy kamboty no tena lasibatry ny Fikambanana Tigra Tamola, ankizy mipetraka any amin'ny faritra tena voa mafy tamin'ilay tsunami tao amin'ny firenena; araka izany dia ireny ankizy kamboty vokatry ny tsunami ireny no tena marefo mora tratry ny fakàna ankeriny sy fandraisana ataon'ny LTTE.
Tamin'ny 2004, namoaka drafitra iray ny United Nations Children’s Fund (UNICEF), nifanarahany tamin'ireo fikambanana marobe toy ny Ministeran'ny Fiahiana ara-tSosialy, ny Tamils Rehabilitation Organization (TRO), ny “Save the Children” (Vonjeo ny Ankizy) ao Sri Lanka, ary ny Firenena Mikambana mba hiatrehana ny toedraharaha sy hanatsaràna ny fiainan'ireo ankizy Sri Lankey niharan'ny ady. Nantsoina hoe LTTE io drafitra io mba hampitsaharana ny fandraisana ankizy ary hamotsorana ireo rehetra efa ankizy miaramila. Io drafitra io dia manainga ny governemanta Sri Lankey hanao hetsika hamerenana ireo fotodrafitrasa fototra ao anatin'ny firenena. Fanampin'izay, io drafitra io dia niantso ny Firenena Mikambana sy ireo ONGs mba hanafaingana sy hanatsara ny fametrahana fandaharanasa mifandraika amin'ny ankizy tratry ny ady ary ny zon'ny ankizy ao amin'io faritra io. Ny 31 Oktobra 2004, tranga vaovao nahitàna fandraisana ankizy 3.516 no voarakitry ny UNICEF hatramin'ny fampitsaharana ny poabasy nosoniavina tamin'ny Febroary 2002. 1.206 monja ireo ankizy tena navotsotry ny Tigra tamin'ny fomba ofisialy, araka ny voalazan'ny UNICEF. Hatramin'ny Novambra 2004, misy tatitra mahakasika ankizy miaramila miisa 1.395 any anatin'ny Tigra Tamola ao anatin'ireo antontan-taratasin'ny UNICEF . Araka ny UNICEF, mbola ambany be ireny tarehimarika ireny noho ny zavamisy hoe : angamba tsy tonga saina amin'ny mety fisian'ny fisoratana anarana ireo fianakaviana sasany, na matahotra ny hanao izany, na mety manana olana amin'ny fandehanana ho any amin'ny biraon'ny UNICEF…azo iheverena io hoe ny fitambaran'ny isan'ny ankizy tavela ao amin'ny LTTE dia mety mbola ho avo efatra heny amin'ilay tarehimarika 1.395 naroso.